Home Sarimihetsika mahatsiravinaStreaming MovieHBO (sarimihetsika) 'The Empty Man' dia horonantsary mampihoron-koditra mahatsiravina
HBO (sarimihetsika)Vaovao Mahafaly Fialam-bolySarimihetsika mahatsiravinaMovie ReviewsStreaming MovieTranofiara (sarimihetsika)
by Waylon Jordan Jolay 18, 2021
David Prior's Ilay lehilahy banga naka an-tsehatra tsimoramora amin'ny Internet buzz, tsy mitovy amin'ny olon-dratsy mpanao filma titular ao amin'ilay sary. Indray andro, tsy fantatro hoe inona izany. Ny manaraka dia nanomboka nahatsikaritra firesahana etsy sy eroa aho. Ankehitriny? Na aiza na aiza.
Iray amin'ireo horonantsary farany novokarin'i Fox talohan'ny nividianany an'i Disney, Ilay lehilahy banga dia mifototra amin'ny tantara an-tsary nosoratan'i Cullen Bunn sy kintana James Badge Dale ho James Lasombra, polisy taloha izay nitady ny zanakavavin'ny mpifanila vodirindrina aminy izay tsy hita. Ny fikarohany dia nitondra azy niditra tao amin'ny antokom-pinoana hafahafa iray nikasa ny hiantso orin'asa tsy miankina amin'ny olombelona toa ny angano an-tanan-dehibe somary nahazo aingam-panahy The Ring ary sarimihetsika mitovy amin'izany tamin'ny voalohany.
“Ny alina voalohany henonao izy. Ny alina faharoa ahitanao azy. Ny alina fahatelo dia hitany ianao, ”hoy izy ireo, nanangana fandaharam-potoana ho an'ilay horonantsary sy ilay mpihetsika azy rehefa nanakaiky ny fahamarinana izy.
Dale dia mitarika mpilalao manan-talenta hiditra Ilay lehilahy banga, anisan'izany i Marin Ireland (Ny Akademia Umbrella), Sasha Frolova (Sparrow Mena), Robert Aramayo (Biby misy hazavana), Ron Canada (Ny tain'olombelona), ary Stephen Root (Office Space), saingy velona ilay sarimihetsika ary maty tamin'ny zava-bitany. Soa ihany fa manana talenta hanalana an'io ilay mpilalao sarimihetsika.
Ny Lasombra-ny no ilaintsika rehetra handehanana amin'ny toe-javatra mampidi-doza loatra sy mampatahotra antsika mpijery. Izy dia manan-tsaina, be fientanam-po ary diso amin'ny fomba mety rehetra. Mahatsapa ny fahasosorany izahay, ny fahalianany hahafantatra, ary amin'ny farany ny hatezerany sy ny tahony.
Ny zavatra tiako indrindra amin'ity sarimihetsika ity dia mifamatotra amin'ny olana lehibe indrindra ho ahy. Sarimihetsika mirehitra miadana miadana izay mandany fotoana amin'ny fananganana fihenjanana sy rivo-piainana ity. Teo aloha sy ny mpilalao dia manasongadina hatrany fa tsy izay hitanao ihany, fa izay tsy azonao, no mety hanimba anao. Tanteraka soa aman-tsara izy ireo ka na ny zavatra madinidinika aza dia mety hanelingelina ny mpijery, ary rehefa misy fampitahorana lehibe kokoa eo imasonao dia hataon'izy ireo mihazakazaka ny fonao.
Ankoatr'izay, miondrika amin'ny lalana marina izy ireo amin'ny fomba mahitsy. Ny hevitry ny vondron'olona manao fanao tsy mendrika dia iray izay nampiasaina ary nanararaotra tamin'ny horohoro, noho izany mahafinaritra ny mahita sarimihetsika maka ny trope amin'ny zavatra misy azy ary manao azy am-pahatsorana mba hananganana paranoia ao amin'ilay mahery fo sy ao aminy mpanatrika.
Iza no tena azonao atokisana amin'ny fiainanao? Iza no tena fantatrao? Ny tena zava-dehibe kokoa, inona tena fantatrao tsara ny momba anao sy ny olona manodidina anao?
James Badge Dale dia manome fampisehoana mahatalanjona ao amin'ny The Empty Man
Ilay lehilahy banga manodinkodina ireo hevitra ireo imbetsaka, manelingelina azy ireo ary manasongadina ny tsy fitaintainan'ny mpijery ilay horonantsary sady manararaotra ny asa soratr'i Jacques Derrida nohazavaina ary koa ny fitongilan'ny Nietzsche. Azontsika atao ny manadihady bebe kokoa amin'ireo lohahevitra ireo –Manana zavatra betsaka holazaina momba ny anarana hoe Pontifex Group sy James Lasombra aho – fa raha manao izany dia ho akaiky ny fianjerana amin'ilay loza mitatao izay mandrahona ny hampiakatra ilay sarimihetsika izahay.
Amin'ny ankapobeny, Ilay lehilahy banga matevina loatra ka maharitra ela loatra. Amin'ny maha mpandinika anay matetika dia voatsikera izahay noho izy ireo niresaka momba ny fandehanana sy ny fanitsiana ny olana nefa tsy manome ohatra hentitra. Soa ihany fa tsy izany no zava-misy eto.
Misy fizarana iray manontolo amin'ny fiandohan'ny horonantsary izay miresaka momba ny foto-kevitr'ilay Empty Man any amin'ny firenena hafa miaraka amina vondron'olona hafa. Mahazo tantara feno isika ao anatin'ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra izay resahina mivantana fotsiny ao amin'ilay sary. Ity subplot iray manontolo ity dia nety ho notapahina, nanety ny fotoana fandehanan'ny horonantsary hatramin'ny ambanin'ny marika adiny roa, ary nahatonga ny tantara iray hentitra kokoa mifantoka kokoa.
Soa ihany, na dia ity tsy fetezana ity aza dia tsy afaka manimba ilay sarimihetsika tsara tsy azo lavina miaraka amin'ny fampitahorana ara-dalàna ary fehin-kevitra izay tena tsy mahazo aina amin'ny fomba tsara rehetra. Ilay lehilahy banga mandeha izao HBO Max ary azo hanofa amin'ny sehatra nomerika hafa.
Topazo maso ilay tranofiara etsy ambany, ary ampahafantaro anay raha efa nahita ilay sarimihetsika tamin'ny fanehoan-kevitra ianao!
David PriorHBO MaxJames Badge DaleStephen RootIlay lehilahy bangaWaylon Jordan
Mandria am-piadanana: Maty ny mpanoratra / mpanoratra, William F. Nolan